musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » | » Hutano Hwakakura Kutyisidzira kupfuura COVID-19 Kubuda?
Hutano Huru Kutyisidzira kupfuura COVID-19 Kubuda?
Nekufa kwevanopfuura mamirioni mashanu pasi rese, COVID-5 yakaisa mutoro wakakura kunharaunda nehurongwa hwehutano pasirese.
Patiri kuenderera mberi nekugadzirisa kukanganiswa kweCCIDID-19, pane kutyisidzira kwehutano hweveruzhinji kunofanirwa kugadziriswa, AMR. Kukosha kwebasa rehutsanana mukupwanya cheni yehutachiona kwakaratidzwa panguva yeCCIDID-19 denda, zvisinei, nyanzvi dzeGHC dzinotya kuti tiri kupupurira hutsanana kuneta sezvo isu tichichinjira munyika yepost-COVID, zvichiwedzera kutyisidzira kwe AMR.
Mwedzi wapera WHO yakatanga chirevo chayo pamusoro pemamiriro ehutsanana hwemaoko pasi rose, ichitsanangura kukosha kwehutsanana hwemaoko mukudzivirira utachiona uye kuderedza mutoro weAMR kuburikidza nekuwedzera hupenyu hwemishonga inorwisa utachiona (eg antibiotics). GHC inogamuchira uku kuwedzera kutariswa kwehutsanana hwemaoko uye iri kutsigira WAAW yegore rino nekutarisa mabasa ayo ekuderedza kudiwa kwemishonga inorwisa mabhakitiriya kuburikidza nekukurudzira kuvandudzwa kwehutsanana hwemaoko kudzivirira kupararira kwehutachiona.
Mutauriri weGHC, Sabiha Essack, Muzvinafundo kubva kuSchool of Pharmaceutical Sciences paUniversity of KwaZulu-Natal, South Africa vanoti, “Hutsanana hune mutoro hwakadai sekugeza mawoko kupindira kunobudirira kwekudzivirira utachiona, kunobatsira kubvisa kudiwa kwemishonga inorwisa utachiona (eg antibiotics). Maitiro akadai sekugeza maoko ane mukana wekudzikisa kutapurirana kwechirwere, sekuziva neCCIDID-19 uye anofanirwa kukurudzirwa post-denda ”.
Kushandiswa kusiri madikanwa kwemishonga inorwisa mabhakitiriya kwakakurumidza kubuda uye kupararira kweutachiona husingachinji. Zvirwere zvakajairika zvinorapwa zvisina kubudirira nekuda kwehutachiona husingarapike nehutachiona hunokonzeresa kufa kwevanhu vanodarika 700 000 pagore pasi rose uye zvinofungidzirwa kuti zvine chekuita nekufa kwevanhu vanosvika miriyoni gumi pagore panosvika gore ra10. nezvikamu zvinosvika makumi mashanu kubva muzana uye inopa hurongwa hwekudzikisa kurairwa kwemishonga inorwisa mabhakitiriya, kuderedza mikana yekuumba utachiona husingaurayiwi nemishonga.
Nekuitika kwekupararira kwechirwere chinotapukira zvakanyanya mumakore anosvika 2030, isu tinofanirwa kutora hutsanana hunogara hutsika kuti tizvidzivirire isu nevadikanwi pakutyisidzirwa kwezvirwere zvinotapukira, kuderedza mutoro we AMR, uye remangwana-uchapupu antimicrobials, senge. antibiotics, kwemakore anotevera.